သမီးစံ: August 2012
သာယာကုန်း ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကြားရေးကျောင်းအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် အဆောက်အဦး ပုံကြမ်းအား တင်ပြအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစောပိုင်းတုန်းက အလှုငွေကို ကြည့်ပြီး ၁၅ပေ x ၃၀ ပေ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း အနေအထားသာ ထမင်းစားဆောင်အဖြစ် ဆောက်လုပ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့ ရည်မှန်းထားတာထက် ပိုလျှံသော အလှုငွေ ပမာဏကြောင့် ၂၀ပေ x ၄၀ ပေ အထိ အတန်အသင့် ကျယ်ပြန်သပ်ရပ်တဲ့ အဆောက်အဦးကို ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ထမင်းစားဆောင်မှ စာသင်ဆောင်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ နွေအခါ -ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် တရားစခန်းအတွက် ရိပ်သာအဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်း လိုအပ်သလို အသုံးချနိုင်အောင် သေသပ်ခန့်ညားစွာ -ဆောက်လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ ညွှန်ကြားမှုနဲ့အတူ အဆောက်အဦး ဖောင်ဒေးရှင်းချမည့်နေ့အား အခုလာမဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (၂၉.၈.၂၀၁၂)ရက်နေ့ မနက် ၁၀နာရီ မင်္ဂလာအချိန်မှာ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး ၂၀ပေ x ၄၀ပေ အဆောက်အဦး မြေနေရာအား ကလေးများလက်ချိတ်ကာ စီတန်းပြီး “အို..အို..အိုးးး.. ပန်းကလေးများ ပွင့်တော့မည်၊ ဖူးတံ ၀င့်လို့ချီ” ဆိုတဲ့ “တို့ကျောင်း” ကဗျာလေးကို သံပြိုင်ရွတ်ဆိုကာ အဆောက်အဦး -ဆောက်လုပ်ခြင်းအား စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုးတွင်းကာလဖြစ်တာကြောင့် ဆောက်လုပ်မဲ့အချိန်ကို ၄၅ရက် (တစ်လခွဲ) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်းချမဲ့နေ့ကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှ မုဒိတာအဖွဲ့သားများနဲ့ ဆောက်လုပ်ပေးမဲ့ အင်ဂျီနီယာအဖွဲ့သာ သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပြီး အလှုရှင်များအတွက်တော့ ဓါတ်ပုံဖိုင်များ၊ ဗွီဒီယိုဖိုင်များကို ပြန်လည် တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါပြီး လုံးဝပြီးစီးတဲ့အချိန်မှာတော့ အလှုရှင်များကို ကိုယ်တိုင်ရေစက်ချစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ဆဲ ကာလမှာလည်း တိုးတက်လာပုံအဆင့်ဆင့်ကို အစဉ်အမြဲ update လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၉.၈.၂၀၁၂၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ စတင်ဆောက်လုပ်မဲ့ အဆောက်အဦး ပုံစံငယ်အား အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား.. (စကေးကိုပါ တပါတည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်)..
FRONT VIEW ဖြစ်ပါတယ်။
BACK VIEW ဖြစ်ပါတယ်..
RIGHT SIDE VIEW အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။
LEFT SIDE VIEW မှ မြင်ရတဲ့ ပုံစံငယ်ပါ။
ROOTING PLAN ဖြစ်ပါတယ်။
ဖောင်ဒေးရှင်းချမဲ့ အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့ ( M.M.Y.G) ကိုယ်စား
8:49 ( GMT)
မြန်မာမုဒိတာရဲ့တတိယမြောက်ခြေလှမ်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရုပ်လုံးပေါ် အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်...။
တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံဘယ်ရွေ့ မလဲ
သာယာကုန်း ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကြားရေးကျောင်းအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် အလှုရှင်များကို -မေတ္တာရပ်ခံပြီး ၁၃.၇.၂၀၁၂ ရက်နေ့မှစတင်ကာ ၁၅.၈.၂၀၁၂ ရက်နေ့အထိ (၃၄) ရက်တိုင်တိုင် M.M.Y.G မှ အလှုခံခဲ့ပါတယ်။ အလှုခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မြင့်မြတ်သောသီလတန်ခိုး၊ အလှုရှင်တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ထက်သန်သော သဒ္ဒါတရား၊ နိုင်ငံအသီးသီးမှ အကျိုးဆောင်တွေရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့ -ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ယခုလှုအတွက် ကျွန်တော်တို့ ရည်မှန်းထားတာထက် နှစ်ဆခန့်ပိုပြီးများပြားတဲ့ အလှုငွေပမာဏနဲ့ အလှုခံခြင်းကို ပိတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဗြိတိန်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ သြစတီးရီးယား၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား ၊စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်ဝမ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ စတဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ စုစုပေါင်းအလှုငွေ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၁,၈၆၉,၃၀၀ တိတိ (တစ်ရာ တစ်ဆယ့် ရှစ်သိန်း ခြောက်သောင်း ကိုးထောင် သုံးရာကျပ်တိတိ) ရရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလိုက် ရရှိခဲ့တဲ့ပမာဏမှာ
My Treasure (Tag)
နွေလပါ။ရေးခိုင်းတာ။My Treasure တဲ့..ခေါင်းစဉ်လေးက..။ သူ့ဘလော့လေး ရုတ် တရက် ပျောက် သွားလို့ပါ။ (အခုပြန်ရသွားပြီလို့သတင်းကောင်း ကြားရပါတယ်..)
မေးခွန်းလေးတွေက(သူ့အနေနဲ့စိတ်မကောင်းစွာမေးနေပေမယ့်) စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေပါ။ ဒီလိုအမှတ် တရစာလေးတွေ ဘလော့တစ်ခုစီမှာ တစ်ပုဒ်တော့ရှိထားသင့်ပါတယ်။ (ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးရင် လက်ဆင့်ကမ်းပါမယ်း)
(၁) သင့်ဘလော့လေးကို ဘယ်အချိန်ကစပြီး တည်ထောင်ခဲ့ပါသလဲ … ဘယ်လိုတည်ဆောက်ခဲ့ရသလဲ ?
2011 ရဲ့ဂျူလိုင်လထဲမှာ ဒီဘလော့လေးကိုစပြီးအသက်သွင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြင်ဆရာကတော့ ဘလော့ဂါ ကိုညီလင်းဆက်ပါ။ Google Search Box ထဲမှာ how to make myanmar blog ဆိုပြီးရှာလိုက်ရာက ကိုညီလင်းဆက်ရေးပေးထားတဲ့E-Bookလေးကိုဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့... ဘလော့မရေး၊ရေးချင်အောင် ဆွဲဆောင်အားအင်မတန်ကောင်းတဲ့ စီနီယာဘလော့ ဂါကြီးတွေကြောင့်ပါ ။ပျော်ပျော်နေတတ်ကြသလို ချစ်ခင်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။ကိုယ့်ဘလော့ကိုယ် ကိုယ်တိုင်စပြီး အသက်သွင်းကာစကတော့အသားမည်းမည်း၊သွားကျဲကျဲလေးပါဘဲ(အခုလည်းမလှပါဘူးး) နောက်တော့မှ နေ့မနား၊ ညမနားကျေးဇူးနဲ့မအိပ်မနေ၊အသက်ရှည်ရာကနေခုလိုသင့်သင့်တင့်တင့်နဲ့ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့် သမီးစံဘလော့လေးကို တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး တစ်စိမ့်စိမ့်ကြည့်ဖြစ်နေအောင် နည်းကောင်း၊လမ်းကောင်းလေး များရှိရင် ပေးသနားကြပါလို့...း)။
(၂) ဘလော့ကို ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် တည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့သလဲ ?
အဓိက ကတော့..ရေးချင်တာလေးတွေရေးဖို့ပါ။ဒါကြောင့် ရေးကာစက ဘလော့နာမည်ကို “အရှုးလွယ်အိတ်” လို့ပေးမလို့ပါ။အရှုးလွယ်အိပ်လို့ပေးလိုက်ရင် ကောင်းတဲ့သူတွေမလာတော့မှာစိုးလို့ ဆယ့်ခြောက်နှစ် တစ် ရက်လျော့နေတဲ့ကိုယ်တိုင်ကသမီးသာသာရှိတာမို့နာမည်တစ်လုံးထည့်ပြီး“သမီးစံ”ဖြစ်သွားရတာပါ။ နောက်ပြီး ဒီဘလော့မှာတင်တဲ့ ပို့စ်တပုဒ်ဖတ်ပြီးရင် စိတ်ထဲတစ်ခုခု ကျန်ခဲ့စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေး လည်းရှိပါတယ်။နောက်ဆုံး ဘာမှမကျန်ခဲ့ဖူးဆိုရင်တောင် ဖတ်လို့ မကောင်းဘူး၊ ဘာတွေရေး ထားမှန်း မသိဘူး လေးတော့ကျန်ခဲ့မှာပါနော်း)။
(၃) သင် သင့်ရဲ့ဘလော့လေးအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ထိ ရည်မှန်းထားသလဲ …
ဘယ်လောက်ထိ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသလဲ ?
နွေလကပြောပါတယ် သူ့ဘလော့ကို Nick Name ပေးတယ်။ My Treasure တဲ့။သမီးစံကပေးပါတယ်။“ရင်နှင့်သည်းခြာ”လို့း)။ ဘလော့ဂါတိုင်း တုနှိုင်းမမှီတဲ့မေတ္တာနဲ့ ကိုယ့်ဘလော့လေးကို နာမည် တစ်ခုစီတော့ ပေးထားကြမှာ သေချာပါတယ်။ အမိ၊အဖလိုပေါ့..။ ကိုယ် တိုင် ကျွေး၊မွေးထားရပြီး ဘာမှ မျှော်လင့်မထားတာ...။ခုကတော့ အင်တာနက်ဖိုးနဲ့ မကျွေးရုံ တစ် မယ်ပါဘဲး)။မြတ်နိုး၊တန်ဖိုး ထားတာကတော့ ဘ၀ရဲ့“အိုအေစစ်”လေး တစ်ခုလိုပါဘဲ။ ၀မ်းနည်းစရာရှိလည်း အကူအညီတောင်းရင်း ၀မ်းနည်းလို့ရပါတယ်။ပေါက်ကွဲ စရာလေးတွေရှိလည်း (ပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်ပြီး)ပေါက် ကွဲလို့ရပါတယ်။ဆူမယ့်သူ မရှိ၊အော်(ငေါက်)မယ့်သူမရှိ၊စာပေစိစစ်ရေးမရှိတဲ့ တကယ့်“အိုအေစစ်”လေးပါ ။မြတ်နိုး၊တန်ဖိုးထားပါတယ်။ ပျောက်သွားရင်တော့ သူ့ကံပေါ့လေ..း)
(၄) သင့်ဘလော့လေး ရုတ်တရက် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ဖူးပါသလား ?
ဘလော့ရေးနေတဲ့ အီးမေလ်းအကောင့် ပျက်တယ်ဆိုတော့ ဘလော့ပျောက် သလိုဘဲပေါ့နော်။ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။အကောင့်က ၀င်နေရင်းနဲ့ သူ့အလိုလို Sign Out ပုံစံမျိုး ဖြစ်သွားတာပါ။နောက် Password ထည့်ပြီး ပြန်ဝင်တော့ Verification Code ဆိုပြီးတောင်းပါတယ်။မှတ်မှတ်ရရ April Fool ညမှာပါ။သုံးနေကျ အကောင့်မဟုတ်ဘဲ ဘလော့ရေးဖို့ သီးသန့်ဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်ဖြစ်နေလို့ တော်ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ဘဲ သုံးနေကျ အကောင့်ထဲကိုဝင် G-Talkကနေ အစ်ကို၊အစ်မတွေကိုလှမ်းပြောတော့ ဘယ်သူမှ မယုံကြပါဘူးး)။ ကံကောင်းချင်တော့ မေခလာနတ်သမီးတစ်ပါးက ယုံသွားပါတယ် (မေခလာနဲ့နှိုင်းတော့ သဘော ကျပါ့ မလားမသိး)။“ခံစားမှုသံစဉ်”ဘလော့ကိုရေးတဲ့ အစ်မပစ်ပစ်ပါ။သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အိုကေမှာ စိုပြေသွား ပါ တယ်။ကံသီလို့ပါ..။မောင်နွေလကော..အဲဒီ့လိုဖြစ်သွားတာထင်ပါရဲ့..။ကလေးက ငယ်သေးတော့ စိုးရိမ် သွား ရှာတာပါး)
(၅) ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တုန်းက သင် ဘယ်လောက်ထိ ခံစားခဲ့ရဖူးလဲ … ?
မပျောက်ဆုံးသေးသူဆိုရင်လည်း အကယ်၍ သင့်ဘလော့လေး ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ … ?
ပျောက်ဆုံးသွားတယ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ နည်းနည်းလေးကံကောင်းသွားတာပေါ့။နှလုံးရောဂါမရှိတဲ့အတွက် ဘယ်လိုမှ မခံစားလိုက်ရပါဘူး။နောက်ပြီး မေလ်းအကောင့်ဒီလိုဖြစ်ရင် ဒီလိုပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ သိထားနှင့်လို့ပါ။အကယ်၍ အဲ့ဒီ့ညက ကိုယ်ပြောတာ ဘယ်သူမှမယုံခဲ့လို့ အကောင့်ပြန်ဖြည်ဖို့မ မဖြစ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ အိပ်လို့ပျော်တော့မယ်မထင်ပါဘူး။
တစ်ရံသောအခါကတော့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခဲ့ဖူးပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာ ကိစ္စထူးဖြစ်ရာကနေ အိုင်တီသမား အချင်းချင်း ဟိုဘက်သည်ဘက် သူHack ငါHackနဲ့ ဘလော့ဂါတွေလည်း လှုပ်လှုပ်၊ လှုပ်လှုပ် ဖြစ် ကုန်ပါ တယ်။ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ၊ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ တိတ်တိတ်ကလေး လိုက်ဖတ်၊လိုက်မှတ်နဲ့ နည်းနည်း ရှုတ်သွားရပါတယ်။တိုင်းတစ်ပါးသား Hack တာတော့မခံနိုင်ပါဘူး။အချင်းချင်းဆို တောင်းပန်လို့ ရနိုင် ပါသေး တယ်။နောက်ဆုံးတော့ “သမီးစံ”လေး ဘေးမသီ၊ရန်မခခဲ့ပါတယ်။(ညာဖက်အောက်ဆုံးနားက ၀က် ကလေးကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်း)ကိုယ့်အိမ်က တောကျတဲ့ဘက်မှာ ဖြစ်နေတာလဲပါပါလိမ့်မယ်။
ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရင် ဆိုတဲ့အတွေးတွေးမိတိုင်း Blog ကို Backup လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်။အတတ်နိုင်ဆုံး ၀ဲကင်းအောင်ထားပါတယ်။တစ်ပတ်တစ်ခါ ဆရာဝန်နဲ့ပြပါတယ်း)။ဒီကြားထဲကမှ ဖြစ်တောင့်၊ဖြစ်ခဲရင်း မတော်တဆ သွားခဲ့ရင်တော့ လက်လွှတ်ရတော့မှာပါ။
ဒီပို့စ်ကိုတဂ်လုပ်ပေးတဲ့ နွေလကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူ့ဘလော့လေးပြန်ရတော့ သူလည်းပျော်နေပါတယ်။
ဒီစာရင်းကို အလကားသက်သက် ပြုစုထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးရှင်း) လေးစားသမှုနဲ့ Relay Tag Post ပါ..။
at August 10, 2012 21 comments:
အဓိပ္ပာယ်ကိုယ်စီနှင့်မို့.. label ထိုးပေးရန် လိုအပ်မည်မထင်း))
မကြည့်ရသေးရင် တူတူကြည့်မယ်နော်း)
ဒါကတော့ ..ကြော်ငြာပါ..း)
၀တ်ပြလိုက်ရင်တော့ ဘယ့်နှယ့်နေမယ် မသိရပါး)
at August 01, 2012 12 comments: